Hadliye “Waxaa baareynaa tirada saxda ee ku dhimatay badda” – STAR FM SOMALIA
Hadliye oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan tirada rasmiga ah ee ku geeriyootay badda, isagoo xusay in aan wali la heyn tiro rasmi ah sida uu yiri.
Waxaa uu sheegay in arrintan ay xiriir kala sameeyeen Safaaradaha Soomaaliya ee Masar iyo Talyaaniga
“Waxaa ognahay in dad Soomaaliyeed in ay meesha ku xasuuqmeen oo tiradoodu badan tahay, waxaan la hadlay safaaradeenna Soomaaliyeed ee joogta Qaahira, waxaan la hadalnay tan Talyaaniga, weli tirada ma cadda laakiin waxaa aad loo ogyahay in mashaqo xoog leh ay meeshaasi ka dhacday oo dadka meeshaasi ku halligmay ay dad Soomaali ah oo badani ku jiraan”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda.
Mr Hadliye ayaa sheegay in Safaaradaha ay u xaqiijiyeen in arrintan ay jirto, balse aan wali la heyn tirada saxda ah iyo dadka kale ee ku dhintay wadamada ay ka yimaadeen.
“Dhammaantood wey xaqiijiyeen inay jirto arrintani, waxaan la ogeyn un tirada sidey tahay iyo wadamada ay ka kala yimaadeen, waxaana shakigani uu ka jiraa qolo walbo waxay leedahay biyaheena kama dhicin ee qolada kale biyahooda ayeey ka dhaceen, marka saacad kadib waan wada hadli karnaa oo waana heli karnaa warbixinno cusub”ayuu yiri Wasiir Hadliye.
Dowladaha Masar, Talyaaniga iyo Gariiga ayaa sheegay in aanay wali heyn tirada la sheegayo ee ah in dad ka badan 400 oo tahriibayaan ah ku dhinteen Badda Meditarrean-ka, hase ahaatee dadkii ka bad baaday mashaqadaas ayaa sheegaya in tirada dadka dhintay ay gaarayaan illaa afar boqon oo labo boqol ka mid ah ay yihiin Soomaali.
Kooxo hubaysan xalay deegaanka Siinay ee u dhaxeeya Magaalada Marka iyo Deegaanka Shalaanbood ay ku dileen 7 ruux